Ihe ileta na obodo Italy nke Cagliari | Akụkọ Njem
Cagliari bụ isi obodo agwaetiti Sardinia, obodo ebe anyi puru ihu ebube Mediterranean. Obodo nke malitere n'oge ochie nke hụkwara ndị Carthaginians, ndị Rom, ndị Byzantium ma ọ bụ ndị Arab na-agafe na nke anyị nwere ike ịchọta ọtụtụ akụkụ nke oge gara aga. Ọ bụ ya mere ọ ji bụrụ obodo ebe akụkọ ihe mere eme bụ akụkụ nke nkume ọ bụla na nkuku ọ bụla.
Na obodo anyi nwere ike imata obodo di iche-iche ma nụ ụtọ foduru nke oge gara aga nke Rome ma ọ bụ nri ya dị ụtọ. Ọ bụ obodo gbara osimiri okirikiri, nke kachasị ukwuu na agwaetiti Sardinia, anyị nwere ike ifu n'ime ya iji nwee ọ enjoyụ pụrụ iche.
1 Saint Remy's Bastion
2 Amphitheater nke roman
3 Castlọ nke San Michele
4 Elu ụlọ elu
5 Umlọ ihe ochie ochie nke Cagliari
6 Ọdụ ụgbọ mmiri na agbata obi Marina
8 Ogige Viceregio na Obí
Saint Remy's Bastion
El Bastion nke Saint Remy bụ otu n'ime mgbidi a kacha mara amara n'obodo. E wuru ya na narị afọ nke XNUMX ma bụrụ nke agbata obi Castello a maara nke ọma. Nwere ike ịrịgo Passegiatta Coperta ma ọ bụ mbuli elu na Piazza della Constituzione. Mgbe anyị rutere na okpuru ala a, anyị nwere ike ịnwe ọmarịcha obodo, obodo ndị dị ka ọdụ ụgbọ mmiri ma ọ bụ agbata obi Marina. N'ime ebe a, enwere mbara ala iji nwee ihe dị jụụ ebe anyị na-enwe ọ enjoyụ.
Amphitheater nke roman
El Amphitheater Roman bụ ebe ọzọ anyị ga-ahụ na Cagliari. Ọ bụ otu n’ime ihe ndị ritere arụsị nke ka dị n’obodo ebe ndị Rom si gafee. Taa, anyị nwere ike ịhụ mpaghara ahụ e gwupụtara n'oké nkume na steepụ. Eventsfọdụ ihe ka na-eme ebe a, yabụ ọ bụrụ na anyị nwere isi ọma, anyị nwere ike dabaa na nke. Amphitheater bidoro na narị afọ nke abụọ AD wee nwee ikike maka ọtụtụ puku mmadụ, ebe ọ bụ ntọala mmekọrịta mmadụ na ibe ya n'oge ndị Rome n'obodo ahụ.
Castlọ nke San Michele
Lọ a dị n'ụdị mgbidi dị na mpaghara kachasị elu nke obodo ahụ, ya mere ọ ga-enye anyị echiche dị mma. Ọ bụ ihe gbasara a Nnukwu ụlọ nke XNUMXth nke e wuru iji chebe ma tinye ugwu nke agwaetiti ahụ. Emepụtara ya ka ọ bụrụ ebe ewusiri ike n'ihi mwakpo na ndị ohi, iji chebe ha. Naanị ụlọ elu na akụkụ nke mgbidi ahụ fọdụrụ na ụlọ ochie ahụ, ọ bụ ezie na anyị na-ahụ ya zuru ezu, e weghachiri ya na-anwa ichekwa otu ụdị ahụ. N'ime nnukwu ụlọ ahụ, e nwere ebe etiti nka na ọdịbendị.
Nke a bụ a ụlọ ochie ochie nke echekwara nke ọma dị na mpaghara Castello ama ama. Towerlọ elu a malitere na narị afọ nke XNUMX ma nwee obere na ụzọ ochie na akụkụ ala ya nke na-eduga anyị n'okporo ámá nke obodo ochie ahụ, na-eme ka ọ bụrụ ihe a ga-ahụ. Ka anyị na-agafe n'ụlọ elu ahụ, anyị nwere ike ịchọ ihe oyiyi enyí nke nyere ya aha.
Umlọ ihe ochie ochie nke Cagliari
Nke a bụ ihe ngosi ihe mgbe ochie kacha mkpa n’àgwàetiti ahụ ma nwee nnukwu nnakọta. Ọ bụghị n'efu ka mmepeanya dị iche iche gbara gburugburu agwaetiti ahụ. Ga-enwe ike ihu iberibe na-aga site na prehistory ruo oge ndị ọzọ dịka Byzantine. Ọ bụrụ na ịchọrọ akụkọ ihe mere eme na nkọwa banyere nkà mmụta ihe ochie, o doro anya na nke a bụ ebe ị ga-aga.
Ọdụ ụgbọ mmiri na agbata obi Marina
Ọ bụrụ na ịchọrọ ebe jupụtara na ndụ, ị ga-agafe n'ọdụ ụgbọ mmiri na mpaghara Marina, ebe anyị ga-ahụ ụlọ ahịa na ụlọ nri. Agbata obi a dị n'okporo ụzọ Rome ochie na nso ọdụ ụgbọ mmiri nke Cagliari. Ọ bụ ebe anyị nwekwara ike ịhụ Piazza Yenne na nnukwu ọnụ ụlọ obodo. Ihe Via G Manno n'okporo ámá bụ nke nwere ọtụtụ ụlọ ahịa, ebe ezigbo ọ forụ maka ndị chọrọ ịtụ ọ shoppingụ na ịzụ ahịa.
Nke a E kere ụlọ elu na narị afọ nke iri na anọ ọ bụkwa ya kacha mkpa n’obodo. Ọ bụ otu n'ime ihe kachasị elu na mita 130 ma site na ebe ahụ ị nwere ike ịnwe echiche mara mma nke Cagliari si n'elu. Ọ bụ ụlọ nchebe iji chebe ndị Arab na Genoese nke nwere nnukwu akụkọ ihe mere eme. Na mgbakwunye, afọ ole na ole ka e mesịrị, a na-eji ya dị ka ụlọ mkpọrọ, ọ bụ ezie na emechiri ya n'ihi nnukwu ụzọ mgbapụ. Iji banye na ya ma nwee ike ịrịgoro ịhụ obodo ahụ, ị ​​ga-akwụ ụgwọ ọnụ ụzọ dị oke ọnụ, yabụ ọ bụ nleta nke kwesịrị ya.
Ogige Viceregio na Obí
Nke a bụ otu n'ime n'ámá ndị kasị mkpa nke obodo ahụ, nke emere na narị afọ nke iri na anọ. Ọtụtụ narị afọ ka e mesịrị, e ji ụkpụrụ akụkọ ifo ndị Sardin chọọ ebe a mma, na-eme ka ọ bụrụ ihe ndị njem nleta na-amasịkarị. N'ime ya anyị nwekwara ike ịhụ Viceregio Obí, ọzọ bụ isi nke mmasị na obodo Cagliari.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » Italia » Ihe ịga leta Cagliari